:: My Little World ::: Enable Root login in Ubuntu
ပုံမှန်အတိုင်းဆို Ubuntu မှာ Adiminstration [root] account နဲ့ဝင်လို့ မရပါဘူး။ Root User ကို ပိတ်ထားပေမယ့် Account က ရှိနေတဲ့ အတွက် Root User နဲ့Login ၀င်ပြီး အသုံးပြုချင်တယ်ဆို ရအောင်လုပ်ဖို့ နည်းလမ်း ရှိပါတယ်။
၁။ Root user အတွက် Password သတ်မှတ်ပေးဖို့ လိုပါတယ်။
Terminal ကိုသွား sudo passwd root ဆိုတာကို ရိုက်ထည့်ပြီး root user အတွက် password ကို သတ်မှတ်ပေးလို့ ရပါတယ်။
၂။ Root User login ကို ဖွင့်ပေးရပါမယ်။
System -->Administration-->Login Window ကိုသွားပါ။
Password ထည့်ခိုင်းတဲ့အခါ လက်ရှိ ၀င်ထားတဲ့ user ရဲ့ passowrd ကိုထည့်ပေးပါ။ Pop-up window တစ်ခု ပေါ်လာပါလိမ့်မယ်။ "Security" tab ကိုသွားပါ။
"Allow local system administrator login". ဆိုတဲ့ checkbox ကို ရွေးပြီး အဲဒီ Widnow ကို ပိတ်လိုက်ပါ။
ဒါဆိုရင် Ubuntu ကို root user နဲ့login လုပ် သုံးနိုင်ပါပြီ။ password အမြဲတမ်း ရိုက်ထည့်နေရတာကို နှစ်သက်ခြင်း မရှိ၊ အလုပ်ရှုပ်တယ် ထင်တဲ့အတွက် Ubuntu သုံးတဲ့အခါတိုင်းမှာ root အကောင့်နဲ့ ပဲ သုံးဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်မအနေနဲ့တခြား Security အရေးတွေကို သိပ်ပြီး ဂရုစိုက်စရာမှ မလိုတာ။ ဒါနဲ့Root Account ကို သုံးခြင်းရဲ့ ကောင်းတဲ့ အချက်နဲ့မကောင်းတဲ့ အချက်တွေကို သိချင်တယ်ဆို ဒီနေရာမှာ ဖတ်ကြည့်နိုင်ပါတယ်။
Root User အတွက် Password သတ်မှတ်ရာမှာ နောက်တစ်နည်းက System--> Administration -->Users and Groups ကိုသွားပြီး သတ်မှတ်လို့ လည်းရပါတယ်။ အဲဒီမှာ root account က lock ဖြစ်နေရင် unlock အရင်လုပ်ဖို့ လိုပါတယ်။ အဲဒီနောက် "root" အပေါ်မှာ Double-click နှိပ်ပြီး ပေါ်လာတဲ့ Window ထဲက "Set password by hand" ဆိုတဲ့ နေရာမှာ ကိုယ့်သတ်မှတ်ချင်တဲ့ Password ကို ထည့်လို့ ရပါတယ်။
Posted by Nay Nay Naing at 1/11/2009 02:40:00 AM
Sunday, January 11, 2009 7:35:00 AM
Sunday, January 11, 2009 1:36:00 PM
ကျောင်းက အခုဘာသာမှာ အဲဒီ့ ubuntu နဲ့ပတ်သက်တာဟာတွေ သုံးနေ သင်နေရတယ်..
Sunday, January 11, 2009 3:17:00 PM
ကျွန်တော်လည်း Ubuntu ကို ပြီးခဲ့တဲ့အပတ်က စမ်းကြည့်တယ်။ Root Account ပြဿနာပေါ်နေတာနဲ့ ခဏနားလိုက်တယ်။ အခုလို ခူးပြီးခပ်ပြီးတွေ့လို့ အတော်အဆင်ပြေသွားပြီ။ ကျေးဇူးပဲ။
Sunday, March 15, 2009 9:15:00 PM
♦ How to protect your GMail account!
သံလွင်အိပ်မက် အတွဲ(၃) အမှတ်(၁)
၂၂-၀၁ ဒိုင်ယာရီ ..
☺Photography is Hard Work
Be Yourself , Be Strong and Be Silly
Chinese New Year promotion for Apple Products (SG)...
♠ Fried Oyster Omelette (Orh Luak)
ဒီည၊ ငါ့အိပ်ရာကလေးကို ငါစီပို့ ပေးကြ - မိုဃ်းဇော်
Sun Java Certification eB00k
KDE vs Windows 7
♪ ရှင်းရင်းရှင်းရှင်း ရှုပ်လာ...
♣ Believe it or not!!
☺ ဘာလဲ ဘယ်လဲ
♪ Someone who believes in you
Maximise Your Leave 2009 (Singapore)